Manokatra sisin-tany ho an'ny mpizahatany vahiny i Sipra amin'ny 1 martsa
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Sipra » Manokatra sisin-tany ho an'ny mpizahatany vahiny i Sipra amin'ny 1 martsa
Afaka mitsidika an'i Sipra ny mpizahatany raha tsy misy fameperana karoka raha tsy tonga ny valim-panandramana tsara ho an'ny COVID-19 rehefa tonga izy ireo
Nanambara ny manampahefana Cypriot fa hanokatra ny sisintaniny amin'ireo mpizahatany vahiny ny firenena amin'ny 1 martsa.
“Afaka mitsidika an'i Sipra ny mpizahatany raha tsy misy fameperana karoketra raha tsy tonga ny valim-panadinana azo antoka rehefa tonga izy ireo Covid-19», Hoy ny lefitry ny minisitry ny fizahantany Savvas Perdios.
Araka izany, nesorina ny fandraràna ny fivezivezena ho an'ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 56.
Ny firenena izay hanokafan'i Sipra sisin-tany dia hozaraina ho sokajy. Ireo no firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana, firenena an'ny faritra ara-toekarena eropeana, firenena fahatelo ary fanjakana hafa.
Ny firenena tsirairay, arakaraka ny toe-javatra epidemiolojika ao anatiny, dia homarihina amin'ny loko iray na iray hafa. Ireo olom-pirenena tonga avy amin'ny firenena 'maintso' dia havoaka tsy handray izany Covid-19 fitsapana.
Ireo mpizahatany avy amin'ny faritra 'voasary' dia mila manolotra taratasy fanamarinana ratsy ho an'ny Covid-19 alohan'ny hidirana amin'ny fiaramanidina.
Ireo tonga avy any amin'ny firenena "mena" dia mila mandalo a Covid-19 fitsapana alohan'ny fiaingany ary rehefa tonga any Sipra.
Miato ny sidina mpandeha rehetra miaraka amin'i UK i Portugal
Airbus dia mamoaka ny fiaramanidina Flightlab